ISPOORTII Bariisaa – Ethipian Press Agency
Finfinnee: Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa 33fa Kaameerunitti adeemsifamaa jirurratti Waaliyaan taphawwan lameen taasifatetti mo’amuudhaan abdiin tapha ittaanutti darbuuf qabu waan dimimmise fakkaata. Waaliyaan tapha duraa kan taasifatee Keep Vardee wajjin yoo...	Read more »
Dorgommii atileetiksii Adaamaatti namoonni kumni 30 ni hirmaatu
Finfinnee: Dorgommiin atileetiksii kiiloo meetira kudhanii galiin isaa namoota sababa addaddaatiin qe’eesaanirraa buqqa’aniif oolu har’aa magaalaa Adaamaatti ni adeemsifama. Pirezdaantii Waldaa Atileetiksii “HIMA” jedhamu Komaandar Huseen Shiboo Gaazexaa Bariisaaf akka ibsanitti, dorgommii...	Read more »
Ispoortii aadaa yeroo ayyaana Qillee taphataman
Finfinnee: Itoophiyaatti Guyyaa Dhaloota Iyyasuus Kiristoosiin ilaalchisuun waggaa waggaadhaan ispoortiin aadaa adeemsifamaa tureera. Akaakuuwwan ispoortii addaddaatiin kan gaggeeffamu ispoortiin aadaa kun dorgommii dargaggootaafi ga’eessota jidduutti taasifamuun adeemsifama. Akaakuun ispoortiiwwan kunneenis, gugsii Fardaa,...	Read more »
Hojiilee milkaa’oo Federeeshinii KubbaaMiilaa Itoophiyaa
Arbaaminci: Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa haala kanaan dura turerra fooyya’inaan adeemaa jiraachuun beekama. Federeeshinichi yaa’ii dhaabataa 13fa magaalaa Arbaamicitti adeemsifaterratti gabaasa dhiheessuudhaan irratti mari’atameera. Akka hirmaattonni yaa’ichacharratti argaman ibsanitti, federeeshinichi kanaan dura...	Read more »
Misooma ispoortiif iddoowwan oolmaa ga’an barbaachisaadha
Finfinnee: Ministeeri Aadaafi Ispoortii tibbana sadarkaa ijaarsi istaadiyeemii Finfinnee, naannawa Garjiitti argamu irra jiru daaw’atee daawwachiiseera. Daaw’annicharratti kan argaman Ministir Addaafi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa akka ibsanitti, barana babaldhisa iddoowwan oolmaa ispoortiif...	Read more »
Bakka buutonni Luusiiwwanii milkaa’aa jiru
— December 25, 2021 comments off
Finfinnee: Gareen kubbaa miilaa dubartoota Itoophiyaa umrii 20 gadiifi bakka bu’oonni Luusiiwwanii milkiidhaan arreedaa jiru. Waancaa kubbaa miilaa Bahaafi Giddugaleessa Afrikaa torban sadii dura Ugaandaa, Kaampaalaatti adeemsifametti shaampiyoona ta’uunsaa kan yaadatamuudha. Gareen...	Read more »
Qophii waancaa Afrikaatiif qophii taasifamaa jiru
— December 18, 2021 comments off
Finfinnee: Bu’uura kubbaa miilaa Afrikaa kan buusee koreen kubbaa miilaa wayita ammaa Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jedhamuudhaan beekamuu akka hundaa’u yaada kan dhihessee ALA bara 1957tti. Miseensonni korichaa ammoo Itoophiyaa, Sudaaniifi Misira...	Read more »
Atileetota beekamoo RIB maddii hiriiran
Finfinnee: Atileetonni beekamoon biyya keenya jaalatan goota Raayyaa keenyaa maddii adda waraanaatti hiriirunsaantti gamachu guddaan akka isaanitti dhagahame dubatan. Atileet Gazaahany Abarraa, Atileet Fayissaa Leellisaafi Atileet Komaandar Maarqoos Gannatii kanaan dura biyya...	Read more »
Deggartonni Waaliyaa 500 Waancaa Afrikaa daawwachuuf carraa argatu
— December 11, 2021 comments off
Finfinnee:Waancaan Kubbaa Miilaa Afrikaa 33fan ALA ji’a Amajjii bara 2022 magaalota Kaameeruunitti gaggeeffama. Walmorkii kanarratti biyyoonni Afrikaa 24 ramaddii saddeetitti adda qoodamuudhaan walfalmu. Itoophiyaan waggoota saddeet booda waancaa kanaaf darbusheetiin deeggartonni 500...	Read more »
Luusiwwan carraa darbuusaanii bal’ifachaa jiru
Finfinnee: Walmorkiin Waancaa Kubbaa Miilaa Dubartoota addunyaa umrii 20 gadi isa 10fa ALA Hagayya 10-18 bara 2022 Kostaariikaatti adeemsifama. Waancaa kanarraatti ardii jaharraa gareewwan biyyoota 16 ni hirmaatu. Afrikaarraa carraa hirmaannaa kan...	Read more »